FSF အတွက် ဦး စားပေးအခမဲ့စီမံကိန်းများ Linux မှ
FSF အတွက် ဦး စားပေးအခမဲ့စီမံကိန်းများ
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း (FSF - Free Software Foundation) ကထုတ်ဝေသည် အခမဲ့စီမံကိန်းများ၏ ဦး စားပေးစာရင်း; ဤစာအုပ်သည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအား၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ညွှန်ကြားသည်။
ဤစီမံကိန်းများကို FSF မှအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ developer များပါ ၀ င်စေရန်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ application များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၎င်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်မကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းတစ်ခုပြီးစီးခဲ့သည် - ထောက်ပံ့ခြင်း RARv3 ဖိုင်ပုံစံအတွက်အခမဲ့ပံ့ပိုးမှု.
1 GNU PDF - အဆင့်မြင့် PDF ပံ့ပိုးမှု
2 Gnash - အခမဲ့ Flash Player ဖြစ်သည်
3 Coreboot - အခမဲ့ BIOS အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
4 အခမဲ့ Skype အစားထိုး
6 အခမဲ့ Google Earth ကိုအစားထိုးခြင်း
7 100% အခမဲ့ဖြန့်ဝေ
8 GNU Octave - Matlab အတွက်အစားထိုး
9 OpenDWG စာကြည့်တိုက်များအတွက်အစားထိုး
10 GDB တွင်ပြောင်းပြန် debugging
12 Oracle ကပုံစံများကိုအခမဲ့အစားထိုး
14 PowerVR Controller
GNU PDF - အဆင့်မြင့် PDF ပံ့ပိုးမှု
စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက် GNU PDF PDF (ISO 32000) ဖိုင်အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာများကိုကိုင်တွယ်ရန်အရည်အသွေးမြင့်စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ - စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ဤစီမံကိန်းကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်၊ အဆင့်နိမ့်စီပရိုဂရမ်များ၊ ဝက်ဘ်ပရိုဂရမ်များ၊ စာပြန်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ သင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်အနုပညာလက်ရာများဖန်တီးရန်။ အပလီကေးရှင်းများ၊ ဒါ့အပြင်သင်တစ် ဦး အောင်စဉ်းစားလိမ့်မည် တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းမှု FSF မှတဆင့်။
Gnash - အခမဲ့ Flash Player ဖြစ်သည်
ကြိတ် Flash movies များကိုကစားရန်အတွက် GNU program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Flash သည် Adobe မှ animation နှင့် multimedia ဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Gnash သည် GameSWF အပေါ်အခြေခံသည်။ Flash (SWF) ဗားရှင်း ၇ ကာတွန်းအများစုနှင့်အချို့သောဗားရှင်း ၈ နှင့် ၉ တို့ကိုထောက်ခံသည်။ Gnash သည်လူကြိုက်များသောဆိုဒ်များနှင့်မီဒီယာ (YouTube ကဲ့သို့) ကိုကိုင်တွယ်သော်လည်း၎င်းမှာအလုပ်များစွာလိုအပ်နေသေးသည်။ Adobe Flash Player ကိုအစားထိုးပါ။ အလည်အပတ် http://www.gnu.org/software/gnash/ Gnash ကိုထည့်သွင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ်အတွက်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ Gnash စီမံကိန်းကိုကူညီရန်အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ပရိုဂရမ်ကို သုံး၍ bug များကိုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်သည်။ Gnash စီမံကိန်းကိုမည်သို့ပံ့ပိုးသူဖြစ်စေလိုသည်ဆိုပါက Gnash developer များမေးလ်စာရင်းတွင်ပါဝင်ရန်စဉ်းစားပါ (gnash-dev@gnu.org), Gnash မေးလ်စာရင်း (gnash@gnu.org), ဒါမှမဟုတ် irc.freenode.net ပေါ်က #Gnash channel ကိုသင့်ကိုပေးလိုက်ပါ။
Coreboot - အခမဲ့ BIOS အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
Coreboot သည်ယနေ့ကွန်ပျူတာအများစုတွင်ဖြန့်ဝေထားသောစီးပွားဖြစ် BIOS (firmware) ကိုအစားထိုးရန်ရည်ရွယ်သည့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် BIOS သည်သီးသန့်လွတ်လပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကို အသုံးပြု၍ မိမိ၏ system ကို run သူတစ် ဦး ၏တစ်ခုတည်းသောကျောက်တုံးဖြစ်သည် အခမဲ့ BIOS အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး FSF) ။ အလည်အပတ် http://www.coreboot.org Coreboot ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထောက်ပံ့ထားသောစနစ်များနှင့်အခမဲ့ BIOS တစ်ခုမည်သို့စတင်လည်ပတ်ပုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ Coreboot စီမံကိန်းကိုသင်ကူညီနိုင်သောအကြီးမားဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Coreboot သည်ထိုစနစ်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ထုတ်လုပ်သော BIOS များအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ရန်ရောင်းချသူများအားအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် Coreboot တီထွင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကလိုင်းသို့ဝင်ရောက်ပါ # ဖိနပ် irc.freenode.net မှာ ၀ င်ပါ Coreboot စာပို့စာရင်း လက်ရှိ developer များနှင့်ပြောဆိုရန်။ ဂရပ်ဖစ်ကတ်များအတွက် VGA BIOS တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုနှင့်အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်သည့်နောက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ VGA BIOS ကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ထုတ်လုပ်သူများကိုစည်းရုံးသည်။ အကယ်၍ အခမဲ့ VGA BIOS တစ်ခုကိုတီထွင်ချင်လျှင် AMD ၏ Geode LX chipset သည်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများလက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်.
အခမဲ့ Skype အစားထိုး
Skype ကို သည် IP ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပရိုတိုကောကိုအသုံးပြုသောအသံဖြစ်သည်။ Skype သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုသူအမြောက်အများကိုစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သူနားထောင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တရုတ်အစိုးရသည် Skype ၏စကားဝိုင်းများကိုသူလျှိုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Skype နှင့်လိုက်ဖက်သောဂလိုင်းဖောက်သည်ကိုဖန်တီးရန်အားမပေးလိုကြပါ၊ သို့သော် Ekiga ကဲ့သို့သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနေရာတွင်အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းကိုဖန်တီးရန်၊ ပံ့ပိုးရန်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းလိုပါသည်၊ အခမဲ့ VoIP အားလက်ခံရန်နှင့်အသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ SIP နှင့် XMPP / Jingle ကဲ့သို့သောဗွီဒီယိုနှင့် chat protocol များ။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ Skype ကိုမသုံးပဲအခမဲ့အစားထိုးဆော့ဝဲများအစားထိုးဖို့ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ အစီအစဉ်များ၏စီးရီးကဲ့သို့ Ekiga , မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် , Coccinella, QuteCom နှင့် SIP ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူ၊ အရာ Skype ကိုသဘာဝအစားထိုးဖြစ်ကြသည်။ မင်္ဂလာ သည် Jabber ကို အခြေခံ၍ ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုထောက်ပံ့သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် NLnet ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ။ NLnet သည်စီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့သည် ပွင့်လင်း ဒီareaရိယာ၌။ ဤပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုသူများသည် bug အစီရင်ခံစာများနှင့်စီမံကိန်းများကိုတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် developer တစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်သင်ခန်းစာများအပြင်အစီရင်ခံစာအမှားအယွင်းများကိုအတူတကွထည့်နိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများစွာသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ကြသည် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမအောင်မြင်နိုင်လို့အကောင်းဆုံးဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်တွေကိုသုံးချင်တယ်။ နေ့တိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုဝါသနာရှင်များဖြစ်လာကြပြီးသူတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်များသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်လာသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရမည်
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ အခမဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သည့်ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည် ရုပ်ရှင်ရုံ, Cinelerra, Avidemux၊Kdenlive၊ LiVES၊ Lumieraနှင့် PiTiVi, Blender, OpenShot နှင့် ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်သူဖွင့်ပါ ကူညီရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာဤအယ်ဒီတာများကိုအသုံးပြုရန်နှင့်အခြားသူများကိုလည်းအလားတူပြုလုပ်ရန်အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ bug အစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခြင်း, feature အသစ်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းခြင်း, သင်ခန်းစာများ, လမ်းညွှန်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများတိုးတက်အောင်အားဖြင့်ဤစီမံကိန်းများကိုတိုက်ရိုက်ကူညီနိုင်သည်။
အခမဲ့ Google Earth ကိုအစားထိုးခြင်း
Google Earth ကို မြေပုံအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုမှတ်သားရန်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ client အတွက်အခမဲ့ဗားရှင်းလိုအပ်ပါတယ် ဂူဂဲလ်မှပေးသောဒေတာများကိုကြည့်ရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤသုံးစွဲသူသည်အခမဲ့မြေပုံစီမံကိန်းများမှဒေတာများအပါအ ၀ င်မတူညီသောအချက်အလက်များနှင့်အလုပ်လုပ်သင့်သည် ပွင့်လင်း Street, Maps ကို.
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ Google Earth နှင့်တန်းတူ KML ဖိုင်များကိုဖတ်သည့် 3D rendering အင်ဂျင်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့ geolocation ၀ န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဝေရန်ကူညီသည် ပွင့်လင်း Street, Maps ကိုနှင့်ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုအထောက်အကူပြု စကငျြကြောကျ.
gNewSense နှင့် Trisquel ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသာပါ ၀ င်သော GNU / Linux လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတို့သည် binary blobs နှင့်စီးပွားဖြစ် software ပါ ၀ င်သော package သစ်ပင်များမပါဘဲ Debian နှင့် Ubuntu ပြုပြင်ထားသောအခမဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပြုပြင်ရန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖြန့်ဝေမှုများစာရင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ GNU / Linux ဖြန့်ချိမှုကိုလုံးဝလွတ်လပ်စေသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကြည့်ပါ အခမဲ့ဖြန့်ဝေများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ FSF ၏။ အခြားသူများကိုလည်းသင်ကူညီနိုင်သည် လူကြိုက်များဖြန့်ဝေ အပြောင်းအလဲကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ရန်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။
GNU Octave - Matlab အတွက်အစားထိုး
GNU Octave သည်အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် linear နှင့် nonlinear ပြproblemsနာများကိုကိန်းဂဏန်းပုံစံဖြင့်ဖြေရှင်းရန်နှင့် Matlab နှင့်လိုက်ဖက်သောဘာသာစကားကို အသုံးပြု၍ အခြားကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသော command-line interface ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အလည်အပတ် http://www.gnu.org/software/octave GNU Octave စီမံကိန်းတွင်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်၊ မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်၊ မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်ဟူသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ Matlab မှပေးထားသော packages များအတွက်အစားထိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် GNU Octave တွင်အဆင့်မြင့် package များကိုဖန်တီးရန်အားပေးပါ။ GNU Octave တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည် စာပို့စာရင်း နှင့်စာမျက်နှာစစ်ဆေးပါ "အကူအညီလိုအပ်သည်".
OpenDWG သည် CAD ဖိုင်စုဆောင်းမှုတစ်ခု၊ CAD အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် CAD ဖိုင်များဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခြင်းအတွက်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာများဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအလားတူပေမယ့်အခမဲ့ပဏာမခြေလှမ်းလိုအပ်ပါတယ်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ GNU အထုပ် တကယ DWG ဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်ရန် C ၌ရေးထားသည့်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ OpenDWG စာကြည့်တိုက်များအတွက်အခမဲ့အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ (DWG သည် AutoCAD ၏မူလဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ )
GDB တွင်ပြောင်းပြန် debugging
La ပြောင်းပြန် debugging ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခံရပြီးကတည်းက GDB (GNU project debugger) သည်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သော debugging အတွက်အထောက်အပံ့အချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ GDB ကိုထိန်းသိမ်းသူများကပြန်လည်တည်ဆောက်။ ရသော debugging အတွက်အထောက်အပံ့ကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်ဤအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့်ပူးပေါင်းသူများကိုရှာကြသည်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ Query ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက် GDB သည်နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်သော debugging အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောလက်ရှိအထောက်အပံ့အပေါ်တွင်၎င်း၊ အပိုဆောင်းအလုပ်စာရင်း (စာမျက်နှာ၏အဆုံးမှာ) ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါ campaigns@fsf.org .
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစီမံကိန်းများ OrangeMesh network router များသို့ network router များပြောင်းရန်လွယ်ကူစေပါ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု။ သို့သော်၊ ယခုအချိန်တွင်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးမပြုပဲ OrangeMesh ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ အခမဲ့ဒရိုင်ဘာများနှင့် routers များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အဆင့်နိမ့်သောဆော့ဝဲလ်များအတွက်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာထုတ်လုပ်သူကိုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့လိုင်စင်အောက်ရှိသူတို့၏ယာဉ်မောင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကုဒ်ကိုဖွင့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်သုံးရန်မလိုအပ်သည့် router များသင်သိပါက FSF သို့ ဆက်သွယ်၍ အီးမေးလ်ပို့ပါ hardware@fsf.org။ ရန်ပုံငွေရှာဖွေသောစီမံကိန်းများသည်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားရန်စဉ်းစားသင့်သည် အဆိုပါ NLnet ဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
Oracle Forms အတွက်အခမဲ့အစားထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် Oracle ၏စီးပွားဖြစ်ဒေတာဘေ့စ်ကိုအသုံးပြုသောသူများအားသူတို့၏ application များနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များအားပြန်လည်ရေးသားစရာမလိုဘဲအခမဲ့ဒေတာဘေ့စ်သို့လွယ်ကူစွာပြောင်းရွှေ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ - အကယ်၍ သင်သည်ဤစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကစာပို့စာရင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ အစားထိုး - ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.
အသံသွင်းချက်များကိုအလိုအလျောက်ကူးယူနိုင်သောဆော့ဝဲလ်လိုအပ်သည်။ YouTube သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ကမ်းလှမ်းသော်လည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
ကူညီရန်နည်းလမ်းများ။ သင်ဤစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကူအညီပေးပါ ဝီကီစာမျက်နှာ.
PowerVR သည်လူကြိုက်များသော 3D ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးဖုန်းများ၊ netbook များနှင့်လက်ပ်တော့များတွင်လိုအပ်သော 3D graphics အရှိန်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သောအခမဲ့ဒရိုင်ဘာမရှိသေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » FSF အတွက် ဦး စားပေးအခမဲ့စီမံကိန်းများ
ရရှိနိုင် Linux Mint 11!